ဝန်လေး၍ ပင်ပန်းသော သူအပေါင်းတို့၊ ငါ့ထံသို့လာကြလော့။ ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်။
ငါ့ထမ်းဘိုးကိုတင်၍ ထမ်းကြလော့။ ငါ့ထံ၍ နည်းခံကြလော့။ ငါသည်နူးညံ့သိမ်မွေ့နှိမ့်ချသော စိတ်သဘောရှိ၏။ သင်တို့စိတ်နှလုံးသည် သက်သာခြင်းကို ရလိမ့်မည်။) "မသဲ ၁၁း၂၈"
ယေရှုနောက်တော်သို့ လူအစုအဝေးလိုက်လာသောအခါ မိုးချုပ်သောအခါစားစရာ မရှိကြောင်း တပည့်တော်သို့သည် အစာရှာဖို့ ယေရှုကိုခွင့်တောင်းသော်လည်း “ယေရှုက၊ သွားရသော အကြောင်းမရှိ။ သူတို့စားစရာဘို့သင်တို့ပေးကြလော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။ "မသဲ ၄း၁၆"။ ယေရှုက ငုင်းအခြေနေအတွက် အဖြေရှာရာ “တပည့်တော်တို့ကလည်း၊ မုန့်ငါးလုံးနှင့်ငါးနှစ်ကောင်မှတပါး အဘယ်စားစရာမျှအကျွန်ုပ်တို့၌ မရှိပါဟု လျှောက်ပြန်လျှင်၊ ထိုမုန့်နှင့်ငါးကိုယူခဲ့ကြဟု မိန့်တော်မူ၏။" ၄င်းအဖြအားဖြင့် ငါးထောင်အတွက်သာမကလုံလောက်ပိုလျှံ ခဲ့သည်၊၊တပည့်တော်တို့သည် ကောင်းသောဇာတိဖြင့် အပြင်ထွက်ဖြေရှင်းခဲ့လျှင် အချိန်ကုန် လူပြင်ပန်းဖြစ်နေမည်၊၊ ခရစ်တော် ထံမေးမြန်းနည်းခံခြင်း အားဖြင့် မှန်ကန်သောအဖြေတွေ့ရှိခဲ့သည်၊၊
ဒီနေ့ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူတွေဟာ မိမိရဲ့ဖြစ်ခြင်း (သို့)ရပ်တည်မှုကို ဘုရားဖော်ပြထားတဲ့ သမ္မာတရားပေါ်မှာ ထပ်တူမပြုနိုင်လို့..(သို့) ဘုရားသခင်၌မိမိဘယ်သူလဲဆိုတာကို မသိလို့ ရုန်းကန်နေကြရပါတယ်၊ စာတန်ဟာ ဘုရားသားတော်ကို လာရောက်စုံစမ်းသွေးဆောင်တဲ့အခါမှာလည်း သူ့ရဲ့ရပ်တည်မှု ကို လာရောက် တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ (မသဲ ၄း၃) ဘုရားကလူကိုသူ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်နှင့်အညီ ဖန်ဆင်းပြီး ဘုန်းတန်ခိုးတော်နဲ့ လွှမ်းခြုံထားသော်လည်း..မာရ်နတ်ဟာ ဘုရားကဲ့သို့ဖြစ်သွားမှာစိုးလို့ ဒီအသီးကို မစားနဲ့လို့ပြောတာဆိုပြီး စိတ်ကိုဆွပေးခဲ့တယ် (ကမ္ဘာ ၃:၅) သင်ဘယ်သူဖြစ်သလဲဆိုတာ ဘုရားက ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့ ပါတယ်..
Written by Saya Khen Kip. Posted in Spiritual Words
နေရာမှန်ဟုဆိုရာတွင် လိုတရနေသောနေရာ/အဆင်ပြေနေသောနေရာမဟုတ်ဘဲ အလိုတော်ရှိသောနေရာဖြစ်သည်။ (ဓမ္ဓရာဇဝင် စတုတ္ထစောင် ၅း၁-၁၈)
သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် နာမည်ဖော်ပြခြင်းမခံရသော်လည်း ကြီးမားသော နိမိတ်လက္ခဏာပြုရန် ဘုရားသခင် အသုံးပြုသောခဲ့သော ဣသရေလ မိန်းမငယ်လေးတစ်ဦးကိုတွေ့ရသည်။ ထိုမိန်းမငယ်လေးသည် မိမိနေရင်း ပြည်ဖြစ်သောဣသရေလပြည်မှ အဖမ်းခံရပြီး တပါးအမျိုးသားများ လက်အောက်တွင် ကျွန်ခံနေရသော်လည်း မိမိရောက်ရှိသောနေရာတွင် ခါးသည်းခြင်း၊ ဝမ်းနည်းခြင်း၊ရန်သူကိုပြန်လည်တုံ့ပြန်ခြင်းများထက်ထာဝရဘုရား အတွက်အသက်ရှင်ရန် ရွေးချယ်ပြီး မိမိအားဖမ်းခေါ်လာသောသခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်မင်းနေမန်သည် အနူဖြစ်၍ မျှော်လင့်ရာမဲ့နေသောအချိန်တွင် မိန်းမငယ်လေးသည် မိမိ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား၏ အသက်ရှင်ကြောင်း၊ အနာရောဂါငြိမ်းစေနိုင်သော ဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဣသရေလပြည်တွင် ထာဝရဘုရား၏ ပရောဖက်ရှိ ကြောင်း ဝေငှသက်သေခံ ဆက်ပေးခဲ့ခြင်းအားဖြင့် ထိုသတင်းသည် ရှုရိပြည်ရှင်ဘုရင်နန်းတော်တွင် လက္ခံယုံကြည်ရသော သတင်းကောင်းဖြစ်လာခဲ့သည်။
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁း၃၁၊ ဘုရားသခင်သည် မိမိဖန်ဆင်းသမျှသော အရာတို့ကို ကြည့်ရှုလျှင်၊ အလွန်ကောင်းသည်ကို မြင်တော်မူ၍၊ ညဦးနှင့် နံနက်သည် ဆဌမနေ့ရက်ဖြစ်လေ၏။
ဒီကနေ့ သင့်ကိုသင် ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။ သင့်ကို ဖြစ်ဘွားစေတဲ့၊ သင့်ကို ပိုင်ဆိုင်တော်မူတဲ့ ဘုရားသခင်ကကော ဘယ်လိုမြင်သလဲ။ ဘယ်သူ့ရဲ့ အမြင်ပေါ်မှာ သင် သဘောတူရပ်တည်ပြီး၊ အသက်ရှင် သွားလာနေပါသလဲ။ ဘုရားသခင်က ခြောက်ရက်လုံးလုံး ဖန်ဆင်းခဲ့သမျှအရာ အားလုံးအပေါ်မှာ အလွန်ကောင်းတယ်လို့ပဲ မြင်တယ်။ အလွန် ပြည့်စုံလွန်းလှတယ်လို့ပဲ မြင်တယ်။ ပြန်နှုတ်ဖို့အတွက်လည်း မပိုတော့သလို၊ ထပ်ဖြည့်ဖို့လည်း မလိုတော့တဲ့ အရာမျိုးကို ဘုရားသခင်က ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ဘုရားသခင်က သစ္စာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့သူ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်၊ သူ့ရဲ့ စကားဟာအမှန်ဖြစ်တယ်။ သူ့ရဲ့စကားအတိုင်း ပြည့်စုံမှုရှိမရှိ ဆိုတာကတော့ ခံယူတဲ့ သင့်ရဲ့ အခြေအနေအပေါ်မှာ မူတည်တာဖြစ်တယ်။